Ny Hetsi-panoherana Gazaita Manohitra Ny ‘Fandripahana Karama’ Nataon’ny Fahefana Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2017 5:29 GMT
Tany am-piandohan'ity volana ity, nipoaka tao Gaza ny fihetsiketsehana lehibe ho fanoherana ny fanapahan-kevitry ny Fahefana Palestiniana (PA) tamin'ny fampihenana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana sy ny filaminana tao Gaza.
Tamin'ny 8 Aprily 2017, Palestiniana an'aliny maro no nanao fihetsiketsehana tao an-tanànandehiben'i Gaza manohitra ny fampihenana ny karama. Nitaky ny fialan'ny Praiminisitry ny Manampahefana Palestiniana Rami Hamdallah sy ny Minisitry ny Vola Bishara mba hametra-pialana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Niaro ny fampihenana ny karama nataon'ny Fahefana Palestiniana i Hamdallah tao amin'ny valan-dresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety ary nilaza fa ilaina ny “fahaiza-mitantana ny krizy ara-bola izay lalovan'ny governemanta Palestiniana noho ny fihenan'ny famatsiam-bola iraisampirenena.”
Nikarakara fitokonana teo anoloan'ny biraon'ny praiminisitra ao Ramallah ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena Palestiniana ao Morondrano Andrefana. Na izany aza, nakaton‘ny mpitandro ny filaminan'ny Fahefana Palestiniana ny lalana rehetra mankany amin'ny lapa mba hampihenana ny hetsi-panoherana.
Mampiasa olona manodidina ny 56.000 ao Gaza ny Fahefana Palestiniana. Nangataka tamin'ireo mpiasam-panjakana tsy hiasa fa hipetraka any an-tranony sady mandray ny karamany tsy tapaka ihany i Abbas rehefa nandray ny fitondrana tao Gaza tamin'ny taona 2007 ny Hamas. Nahazo karama kely na tsy nandray karama mihitsy ireo izay tsy niraharaha ny antso ary nanohy ny asany teo ambany fahefan'ny governemantan'ny Hamas .
Taorian'ny fandresen'ny Hamas tamin'ny fifidianana, nanomboka nampiasa famoretana i Isiraely ary nisambotra mpikambana hatramin'ny 450 tao amin'ny antoko ary nihazona azy ireo tany am-ponja. Vao haingana, nangataka ny famaranana ny fandrindrana ny fiarovana eo amin'ny Fahefana Palestiniana sy ny governemanta Israeliana taorian'ny famonoana ilay mpikatroka malaza Bassel Al-Araj tao Ramallah ireo mpanao fihetsiketsehana Palestiniana.
Niantso ny fanapahana ny karama ho “teti-dratsy vaovao” hamelezana an'i Gaza ny Hamas. Nilaza i Salah Al Bardawil, mpikambana iray ao amin'ny birao politikan'ny Hamas, fa tsy manaiky hampitahorana ny Hamas ary tsy “handohalika eo anatrehan'ny tsindry ara-politika.”
Niantso ity dingana ity ho “heloka bevava” mamely ny fianakaviana Palestiniana an'aliny ao Gaza ny filohan'ny Fikambanan'ny Mpiasam-panjakana Palestiniana ao Gaza, Aref Abu Jarad.
Maro tamin'ny mpitarika Fatah tao Gaza no niala ho fanoherana ny fepetra tsy rariny nataon'ny Fahefana Palestiniana .
Naneho ny ahiahiny momba ny fanapahan-kevitra ihany koa i Nickolay Mladenov, Mpandrindra Manokana ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Dingan'ny Fandriampahalemana any Afovoany Atsinanana :
Nijaly tamin'ny olana ara-toekarena sy ny fepetra iainan'izy ireo tsy mifaditrovana ny Teteza-tanin'i Gaza vokatry ny fahirano nataon'ny miaramila nandritra ny 10 taona izay napetraky ny governemanta Israeliana taorian'ny fandresen'ny Hamas tamin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny taona 2006 sy ny ady Israeliana na ny fananiham-bohitra maro tao Gaza ihany koa, tamin'ny fahavaratry ny taona 2014 ny vao haingana indrindra tamin'izany.
— نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) April 9, 2017M